I-Semalt Expert - 7 I-Must-Have a WordPress Types Plugin
Asikwazi ukukhanyela ukuba amawebhusayithi kunye nama-blogs angaphezu kwe-25 anikwe amandla yi-WordPress, okwenza kubekho inkqubo yokuphatha umxholo we-intanethi. Kwakukho amaxesha apho i-blogger.com yayikuphela kokhetho kubathengisi bokuqukethwe kunye nabalobi, kodwa ngoku i-WordPress iyasetyenziswa ngokubanzi kwaye iyakuthandwa ngenxa yokukwazi ukwandisa ukusebenza kweziza. Ngamazwi alula, unokongeza amakhulu kumawaka eeplagi kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress kwaye unokuphucula ukusebenza kwayo. Iiplagizi zenze kube lula kubaprogram kunye nabangewona iprogram yokwakha nokugcina i-website yezobugcisa. Awudingi naluphi na ulwazi lobuchwephesha ukuze uqalise iwebhusayithi kuba iiplagi ze-WordPress zikhona ukwenza umsebenzi wakho ube lula kwaye ukhawuleze kunanini ngaphambili - gillette mach 3 power. Ezinye iiplagizi ze-WordPress zisinceda sithuthukise iwebhusayithi okanye ibhulogi yezithuthi ngelixa abanye besinceda ukuphucula izinga lokuguqulwa nokunciphisa izinga lokunciphisa.
U-Oliver King, ingcali ehamba phambili ye-12 (Semalt yeeNkonzo zeDarikhi, iye yafanisa iintlobo ezi-7 eziphambili zeeplagi ze-WordPress omele wazi ngazo.
I-caching enye yeyona nto ibalulekileyo kunye neyona nto idume ngayo kwi-intanethi yakho. Ingakwazi ukunciphisa ngokukhawuleza ixesha lokulayishwa kwamaphepha akho ewebhu kwaye unikeze amava omsebenzisi obalaseleyo. Kwakhona, oku kukubonisa indlela yokunciphisa izinga lokuhlawula isayithi lakho kwaye ushiya impembelelo entle kwiinjini zophando ngokukodwa kwiGoogle. Ukukhawuleza kwesosiza sakho, indawo ephakamileyo kunye nengcono ye-injini yayo yokukhangela. Akufanele kumangaliswe ukuba iindwendwe zivame ukuhamba ukusuka kwindawo yakho ukuba ingazifaki ngaphakathi kwemizuzwana emihlanu. Yingakho kufuneka uphucule isantya sokulayisha sesayithi yakho kunye neelungelo elifanelekileyo leeplagiza. Nangona kukho iindlela ezininzi ezikhoyo, kodwa iiplagizi ze-WordPress ezilungileyo zi-W3 Ingqikithi yeCache kunye ne-WP Super Cache.
2. Inketho yokubhaliselwa
Kufuneka uve ukuba imali yonke iposi. Yilokho abahwebi abaphumelelayo bakholelwa kuyo. Uluhlu olukhulu lwababhalisile lunokukunceda ukwandise ishishini lakho ngezinga elikhawulezileyo kwaye unokufumana ulawulo lweentengiso. Kuza kwenza ukuba i-webmasters ibuyele iindwendwe kwiindawo zabo kunye neeblogi ngokukhawuleza..Iiplagizi ezingcono zokubhaliselwa kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress yiNcwadana yokuNgenela kunye ne-WP Subscriber Pro.
Ukuba ufuna ukuqhuba i-traffic yezithuthi kwiwebhusayithi yakho okanye ukuphucula i-injini ye-injini, kufuneka ulungise amaphepha akho ewebhu kwi-SEO. Ukongeza izihloko zeemeta, iinkcazo kunye neempawu zeemeta ngesandla kunzima kwaye ziyakhathaza, kodwa ukudibanisa iiplagi kwiziko lakho kuzakukhupha i-manual kwaye kuya kukunceda ukongeza ulwazi olufanelekileyo ngelo xesha. Iiplagizi zezona zincwadi ezigqwesileyo kunye ezidumileyo kwi-WordPress kule nkqubo yi-WordPress SEO ngo-Yoast, One SEO Pack, kunye ne-SEO Ultimate.
Njengokuba kunjalo, bonke abaphathi bewebhu mabafanele bazi malunga nobukhulu bewebhusayithi yabo. Ngaphandle kolwazi olufanelekileyo malunga nomgangatho wezithuthi zakho, awukwazi ukuthatha izigqibo zokuthengisa ezifanelekileyo. Yingakho kufuneka udibanise indawo yakho kwaye ufake i-Google Analytics njengezixhobo zokuhlaziya. I-Jetpack nayo inhle ukuhamba nayo njengoko ifika ngokuchanekileyo kwedatha kuwe ngaphandle kokudala nayiphi na idideko kuwe.
5. Imibuzo yokuLungisa
Amaphepha omhlaba adlala indima ebalulekileyo ekuphuculeni nasekuphuculeni izinga lokuguqulwa. Ukuba ufuna ukunyusa ukuthengisa okungekho kubangela ukuthengiswa kokuqukethwe, ukuthengiswa kweendaba zoluntu, kunye nokuthengisa i-imeyile, kufuneka ufumane iphepha lokuhamba ngokufanelekileyo. Ikhasi lokuhlawulela lingaqinisekisa abasebenzisi ukuba babhalisele iincwadi zeendaba kwaye benze ukuthenga okunokwenzeka. Kwi-WordPress, kukho iiplagi ezihlukeneyo zokukunceda ukudala amaphepha anamaphepha anyanzelisayo, kodwa uMaphepha oMhlaba, iZedity kunye noPhuculo lwe-Press 2.0 yiyona nto ibhetele.
6. Izithuba ezidityanisiweyo kunye nezidumileyo
Phantse zonke i-webmasters zilwa nomngeni wezinga eliphezulu. Abasebenzisi beza kwiwebhsayithi yakho, bafunde umxholo, bathande kwaye babelane ngawo, kwaye uhambe ukuya kwezinye iisayithi. Oku kwenzeka xa ungaxeleli ibali lakho ngokungathandabuzekiyo. Umveleli akayi kuchitha ngaphezu kwemizuzwana emithathu kwiwebhusayithi yakho kwaye kufuneka uyanciphise izinga lokunciphisa i-rankings engcono. Iiplagizi ezidumileyo zeWindowsPress ezingabongeza ezidumeleyo okanye ezithe ngqo kwiziko lakho ziyi-WordPress I-Posts Related, kunye neYet I-Posts Related Plugin.
7. Ukuhlanganiswa kweendaba zoluntu
Amasayithi eendaba ezentlalo asinceda kakhulu ekuthengiseni i-intanethi. Phantse zonke iiwebhsayithi zijolise ekuqhubeni isithuthi kwiintanethi zentlalo. Ngaphezulu kwama-90 ekhulwini abantu abasebenzisa i-Facebook kunye ne-Twitter ukunxibelelana kunye nosapho kunye nabahlobo, akukho nto ingcono kunokuba isebenzise iifowuni zeendaba zoluntu ukuba zibandakanye. Iiplagizi ze-WordPress ezilungileyo kulo mbandela zi-Ultimate Social Deux, iBar Social Social, kunye ne-Social Links.